| Locker App ကိုအခမဲ့အဘို့အသွား APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Locker App ကို GO
Locker App ကို APK ကို GO
အရည်အသွေးမြင့် themes များ၏အမျိုးမျိုးနှင့်အတူစိတ်ကြိုက် Google Play တွင်ထိပ်တန်း downloads, အတူမ 1 Locker, ရာထူး, အလွန်အမင်း-အကြံပြုလုံခြုံရေး, တည်ငြိမ်ရေးနှင့်လိုက်ဖက်မှု featuring တစ်သော့ခတ်မျက်နှာပြင် Locker GO!
အဆိုပါအတည်ငြိမ်ဆုံးမျက်နှာပြင်သော့ဖုန်းများထက်ပို 8000 မျိုးစုံမှအဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည်! နီးပါး 100 သန်း downloads,, 1,000,000 + အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်တစ်ဦး 4.4-ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်, ထို Go ကို Locker ပဲ! သင့်ရဲ့ screen ကိုနှိုးထကနေ GO Locker လိမ့်မည်လုံးဝသော့ခတ်အိမ်ကခလုတ်အဖြစ်နောက်တဖန်သင့်ရဲ့ privacy ကိုစိုးရိမ်ဘယ်တော့မှမ! သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်မြှင့်တင်ပေးရန် running app များကိုရှင်းလင်းနိုင်ပါသည်, လက်ဝဲ screen ပေါ်မှာ switches များသတ်မှတ်နိုင်သည်!- အခမဲ့အင်္ဂါရပ်များ
- အပြည့်အဝဟာသင့်ရဲ့ privacy (NEW) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်သင့် screen ကိုနှိုးထကနေ Lock ကိုအိမ်မှာ button ကို
- သင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကျော်လွန်စတိုင်, iPhone စတိုင်, android ဖုန်းစတိုင်နှင့်အခြားစတိုင်များသော့ဖွင့်များများနှင့်အတူ themes များ၏ကျယ်ပြန့်အရေအတွက်က (တိုးပွားလာစောင့်ရှောက်)
- စနစ်က switches များနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုမှ Shortcuts
- သော့ခတ်မြင်ကွင်းထဲကနေတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို Read
- switch & Clean
- သတ်မှတ်ရန်အဆင်ပြေ left screen ပေါ်မှာ switched
- တက်မြှင့်တင်ရန်အတွက် running app များကိုရှင်းလင်း
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: facebook.com/GOLocker2016;
ဒီ app ကိုအသုံးပြုခြင်း of Service ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်အုပ်ချုပ်နေသည်: goforandroid.com/en/term-of-service.html
တချို့ဝေဖန် bug တွေ 1.Fixed ။
Locker GO - ဆောင်ပုဒ် & နောက်ခံပုံများ
7.58 ကို MB
ဒီဇင်ဘာ 4, 2016
Dev Team X က GO
App ကို Locker ...
မြန်နှုန်း Locker အခမဲ့
အက်ပလီကေးရှင်း Locker ဖြင့်…
နိုဝင်ဘာလ 10, 2013 မှာ 11: 52 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 9, 2013 မှာ 5: 04 ညနေ
Harsch Shivam says:
နိုဝင်ဘာလ 8, 2013 မှာ 10: 29 နံနက်
ဒါပေမယ့် 3D Lite ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြိုးစားရမှာပါ။ (စ)
အောက်တိုဘာလ 23, 2013 မှာ 5: 19 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 16, 2013 မှာ 2: 07 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 14, 2013 မှာ 12: 01 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 3, 2013 မှာ 8: 29 ညနေ
ဘယ်သူသုံးရမည်ကိုမသိသောသူသည်ဤ app ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မည်သည့် launcher ကိုမဆိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်နောက် launcher 3D ကိုအသုံးပြုသည်။
အောက်တိုဘာလ 2, 2013 မှာ 6: 07 နံနက်
အလွန်ကောင်းသော app ကိုအမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်
စက်တင်ဘာလ 11, 2013 မှာ 3: 20 ညနေ
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသော application တစ်ခုဖြစ်သည်
စက်တင်ဘာလ 25, 2013 မှာ 3: 05 နံနက်
paing soe hein says:
သြဂုတ်လ 30, 2013 မှာ 8: 53 ညနေ
ငါအရမ်းကြိုက်တယ်ဒီ app ကိုကြိုက်တယ် .... ။ App အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ လူတွေကဒီ app ကိုလိုအပ်တယ်။ <3
သြဂုတ်လ 30, 2013 မှာ 1: 08 နံနက်
သူဌေး ek ရေကာတာရွက်တိုင်
သြဂုတ်လ 30, 2013 မှာ 12: 26 နံနက်
Faiyaz Ahmed က says:
သြဂုတ်လ 28, 2013 မှာ 12: 53 ညနေ
ကောင်းတဲ့ application ပါ
သြဂုတ်လ 25, 2013 မှာ 6: 04 ညနေ
OHHHHHHHH WAAOOOOOOO VERYYYYYYYYY NICEEEEEEEE
သြဂုတ်လ 11, 2013 မှာ 2: 41 နံနက်
ဒါကအကောင်းဆုံး app တစ်ခုပါ
Pandey Anand says:
သြဂုတ်လ 9, 2013 မှာ 12: 21 ညနေ
ဇူလိုင်လ 21, 2013 မှာ 5: 59 ညနေ
ဇွန်လ 20, 2013 မှာ 2: 27 နံနက်
မေလ 30, 2013 မှာ 5: 06 ညနေ
မေလ 27, 2013 မှာ 4: 12 ညနေ
ဧပြီလ 16, 2013 မှာ 11: 13 နံနက်
Go Locker ကိုငါဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့အောင်မြင်မှုမရတဲ့မိုဘိုင်းကပြသနေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဧပြီလ 27, 2013 မှာ 1: 41 ညနေ
setting ကိုသွားပါ - app - သွား locker - uninstal
မေလ 4, 2013 မှာ 12: 33 ညနေ
ကျေးဇူးပြုပြီးသင်၏ဖုန်းတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုအက်ပ်များကိုရွေးပါ။ ထို့နောက်အလုပ်မလုပ်ပါက uninstall ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ဒေတာအားလုံးကို backup လုပ်ပြီးပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ
ဧပြီလ 11, 2013 မှာ 11: 25 နံနက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ .nice အက်ပလီကေးရှင်းများ
vahid gh says:
ဧပြီလ 10, 2013 မှာ 2: 53 ညနေ
အလွန်အလွန်ကောင်းတဲ့ Locker နှင့်ဆောင်ပုဒ်
မတ်လ 30, 2013 မှာ 7: 56 ညနေ
မတ်လ 27, 2013 မှာ 9: 15 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2013 မှာ 9: 18 နံနက်
အလွန်ကောင်းသော app များ။
ဇန်နဝါရီလ 28, 2013 မှာ 5: 52 ညနေ
သင်၏အလွန်ကောင်းသော app အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီလ 29, 2013 မှာ 12: 28 ညနေ
ခရက်ဒစ်သည် Go app ပြုလုပ်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဇူလိုင်လ 19, 2013 မှာ 6: 48 နံနက်
ဇန်နဝါရီလ 12, 2013 မှာ 3: 49 နံနက်
ကောင်းတဲ့ app များကို
ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2012 မှာ 4: 23 ညနေ
သင့်ရဲ့ကြီးမြတ် apps များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
vinoth ktr says:
နိုဝင်ဘာလ 17, 2012 မှာ 12: 18 ညနေ
123 နောက်တစ်ခု "